दुनियाँको एक कहालीलाग्दो मृत्युले अत्यन्तै भावुक बनायो – Kantipur Np
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ०५, २०७८ समय: १७:०४:२०
,निको नहुदा आफू यतै छु काखको बच्चा मात्र ल्याएर आउ यतै उपचार गरेर जाँउला भनी नेपालगन्ज बोलाउछन उनका श्रीमानले । अब बाँच्ने आशा सहित उनी घरको सबै चाँजोपाँजो मिलाई एक दुधे बालक काखमा च्यापेर एक्लै नाइट बस चड्छिन उनी ।
गाडीमा चिनेको मान्छे कोहि नहुदा काखको बालकलाई नै आफ्नो रात्रिकालिन यात्राको साथी अनि बिरामी अबस्थाको साहारा सम्झदै यात्रा गरिरहेकी हुन्छिन उनी । बिच बाटामा उनलाइ उल्टि हुन्छ । ,वरपरका सबै सिटका मान्छेहरु मस्त निद्रामा हुन्छन् ।
उनी आत्तिन्छिन र काखको बच्चालाई ओल्टाइपल्टाई बिउझाउने कोसिस गर्दा पनि उ बिउझिदैन । ,उनलाई उकुसमुकुस हुन्छ र सोच्छिन कि बाटामा मलाई केही भैहाल्यो भने यो काखको छोरा.. ???
(फेस्बुकमा देखेको यो तस्वीर र लेखिएको शब्दहरुले मन निक्कै नै विक्षिप्त भयो ? बाँकी तस्वीर आँफै बोल्छ?)
Last Updated on: August 21st, 2021 at 5:31 pm